News Collection: विवाहपछि अन्यत्र सम्बन्ध
विवाहपछि अन्यत्र सम्बन्ध
एसएलसी परीक्षा सुरु हुनु केही दिनअघि कोचिङ क्लास 'बङ्क' गरेर आएकी एक किशोरीलाई मैले भेटेकी थिएँ । विद्यालयकै पोसाकमै आएकी ती छात्रालाई राम्ररी नचिनेकोले मैले केही सोधिन । भोलिपल्ट उनकी मिल्ने साथीलाई तिम्रो साथीले किन बङ्क गर्दै हिँडेको नि भनी सोधेँ ।
ऊ पूरा निराश छ, मम्मीको कारण, उनले भनिन् । मम्मीलाई असाध्यै घृणा गर्छ । आमाको कारण ? मैले फेरि प्रश्न गरेपछि उनले जवाफ फर्काइन्- 'उसको ड्याडी केही वर्षदेखि दुबईमा हुनुहुन्छ । एकदिन आमाको दराज खोल्दा पिल्स भेटिछ । बेस्सरी रूँदै मलाई फोन गरेर सुनाई । उसले अंकल भन्ने ड्याडीको साथीसँग मम्मीको अफेयर रहेछ ।' विवाहितको विवाहित वा अविवाहितसँगको सम्बन्ध हाम्रो समाजमा पहिलेदेखि नै रहे पनि अब भने खुल्नथालेको छ ।
सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति वा सम्बन्धका कारण पीडितले मन मिल्नेसँग आफ्ना कुरा बताउन थालेका छन् । नाम लुकाएर विज्ञसँग सुझाव लिनथालेका छन् ।
कुनै पनि सम्बन्ध चाहे मित्रताको होस्, चाहे विवाहको पालना गर्ने आ आफ्नै नियम हुन्छन्, तरिका हुन्छन् । अझ वैवाहिक सम्बन्धको जग त एकअर्काप्रतिको इमानदारी र विश्वासमा अडेको हुन्छ । हुन त तपाइ-हामी कसैले पनि आफ्नो वैवाहिक जीवनमा कहिल्यै फाटो आउँदैन भनेर ठोकुवा गर्न सक्दैनौं । एकअर्कालाई मनपराएर हुरुक्कै भएर बिहे गरेर सँगै बसेकाहरू पनि यस्तो सम्बन्धमा परेको हामीले देखेका छौं । सँगै बसेर बाहिर सम्बन्ध राख्नु विश्वासघात हो । यही विश्वासघातले प्रतिशोधको भावना पनि जगाउँछ । उमेरका हिसाबले मैले दिदी भनेर बोलाउने एकजनाले आफ्नो पतिको अरूसँग सम्बन्ध रहेको थाहा पाएपछि म पनि देखाउँछु भनेर अविवाहित पुरुषसँग सम्बन्ध राखिन् । पटक-पटक गर्भपतन गराइन् । जब ती पुरुषको अर्की महिलासँगको मित्रताबारे थाहा पाइन्, आफ्नो सम्बन्ध अन्त्य गरिन् ।
आफ्नो दाम्पत्य जीवन सुमधुर होस् भन्ने चाहना कसलाई पो हुदैन र ? तर भावनात्मक अन्तरङ्ग सम्बन्ध नहुँदा, एकअर्कालाई समय दिन नसक्दा, असमझदारी बढ्दै जाँदा, कम आकर्षणजस्ता कारणले विवाहेत्तर सम्बन्ध सुरुवात् हुनसक्छ । मनोविज्ञ सुमाया राईका अनुसार विकल्प खोज्न थाल्दा यस्तो सम्बन्ध स्थापित हुनपुग्छ । यस्तै सम्बन्धका कारण एक पूर्वमन्त्री घरपरिवारबाट सम्पर्कविहीन भएर बसे । एकजना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले केही समयअघि आत्महत्या गरे । सामाजिक मूल्य-मान्यता मिचेर, कसैलाई छल गरेर बनाएको सम्बन्धका कारण नैतिकताको धरातलमा उभिनसक्ने स्थिति रहँदैन । फलानोसँग मेरो यस्तो सम्बन्ध छ भनेर समाजको अगाडि भन्न सकिँदैन । यसैकारण झूठमाथि झूठ बोल्नपर्ने असहज परिस्थिति आउन थाल्छ । तनावपूर्ण जीवन सुरु हुुन्छ । तनाव व्यवस्थापन गर्न नसकेर सहनशिलताको विन्दु नाघेपछि हत्या वा आत्महत्या गर्नसक्ने मनोविज्ञ राई बताउँछिन् ।
जब विवाहेत्तर सम्बन्धका कारण घरमा किचलो सुरु हुन्छ, यसको नकारात्मक असर छोराछोरीमाथि पर्छ । आफ्नो आमाबुवा बीचको सम्बन्ध राम्रो होस्, घरमा मायालुु वातावरण होस् भन्ने चाहना उनीहरूको हुन्छ । तर जब पारिवारिक वातावरण बिग्रन थाल्छ, उनीहरूको रेखदेख र वास्ता ध्यान कम हुुनथाल्छ, उनीहरू विस्तारै एक्लोपनको महसुस गर्न थाल्छन् । अरूसँग बोल्न मन नपराउने, आफैंमा सीमित हुनथाल्छन् । कुलतमा पर्ने खतरा यसले धेरै बढाउँछ । आफ्नो बुवाको विवाहेत्तर सम्बन्धका कारण बारम्बार डान्स रेस्टुरेन्टमा नाच्न धम्की दिने छोरीको मनस्थिति कस्तो हुन्छ होला ? आफ्नी आमाको सम्बन्ध थाहा पाएर छोरा कुलतमा लागेको उदाहरण सुन्दा तपाईंको मन कस्तो हुन्छ ? आमाबुवा भइसकेकाले सजिलै महसुस गर्न सकिन्छ ।
मैले केही दिनअघि भेटेको ती किशोरीले अब के गर्लिन् त ? साथीलाई कतिन्जेल आफ्नो कुुरा सुनाउलिन् ? आमाबुवा गतिला भए पो छोराछोरी गतिला हुन्छन् भनेर टोकस्नेको कमी छैन समाजमा । यस्तो बेलामा आफन्तले साथ दिएर आत्मबल बढाउनुपर्छ । व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक समस्या बन्दै गइरहेको विवाहत्तेर सम्बन्ध अन्त्य गर्न सम्बन्ध गाँस्ने व्यक्ति नै प्रतिबद्घ हुनुपर्छ । जुनसुकै विषयमा खुला छलफल गरी दाम्पत्य जीवनमा रहेका असमझदारी हटाउने प्रयास गर्नुपर्छ । साथै घरपरिवारका अन्य सदस्यले आगोमा घिउ नथपी बिगि्रएको सम्बन्ध सुधार गर्न सकेको सहयोग गनुपर्छ ।
जतिसुकै खुला समाजमा पनि विवाहेत्तर सम्बन्धलाई रूचाइँदैन । अमेरिकाजस्तो खुला समाज भएको देशमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले विश्वप्रसिद्घ गल्फ खेलाडी टाइगर उड्सको विवाहेत्तर सम्बन्ध सार्वजनिक भएपछि उनी विज्ञापनका लागि उपयुक्त प्रतिनिधि नभएको भन्दै उनीसँगको व्यावसायिक सम्झौता तोडेका थिए । हुन त कतिले यस्तो सम्बन्धलाई नितान्त व्यक्तिगत मामिला भन्छन् । कतिले यसलाई शारीरिक आवश्यकताका रूपमा लिन्छन् । तर कानुनी र सामाजिक रूपमा यो स्वीकार्य छैन । कुनै माध्यमबाट बाहिर आउला भनेर ढाकछोप गर्दागर्दै छोराछोरीले थाहा पाए उनीहरूमा कस्तो असर पर्ला ? गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ ।